कांग्रेस पराजयपछिको बाटो « CANDOR
« Nepal: The rocky red road
कांग्रेसको अबको बाटो »
कांग्रेस पराजयपछिको बाटो
Posted by Thaneshwar on अप्रील 24, 2008
भन्छन्- छोरा बिग्रिए विवाहको जिम्मेवारीले बांध्नु, राजनीतिक दल बिग्रिए सत्ताको जिम्मेवारीले । माओवादी ‘समस्या’को अन्तिम समाधान सायद यसरी नै गर्न चाहे जनताले । त्रास, आश र निकास यी तीन भिन्न मनोवैज्ञानिक कोणबाट प्राप्त मतले माओवादीलाई विजेता बनाएको छ। चुनावमा दुब्लो गणित प्राप्त गरेर शान्ति प्रक्रियाबाट माओवादी बाहिरिने त होइन ? फरक विचारका मानिसमा पनि चुनावअघि यस्तो चिन्ता थियो । स्वाभाविक रूपमै त्यस्ता लाखौं चिन्ताबाट लाभ लियो उसले । जिते सत्ता, हारे नयां खाले क्रान्ति भन्ने धम्कीलाई विनम्रतापूर्वक पस्कियो । देशैभरि दबाबको वातावरण सिर्जना गर्न दार्चुला, रामेछाप, सोलु र रसुवाका घटना सम्पादन गर्‍यो । कब्जा साहित्यको व्यावहारिक अनुवादका लागि माओवादी पंक्ति युद्धमनोविज्ञानले मैदानमा क्रियाशील भयो । “यसपटक माओवादीलाई” भन्ने आश बेच्न, अलिकति विश्वास उमार्न र हिंसाबाट मुक्तिका लागि उसैलाई चाबी सुम्पनु नै निकास हो भन्ने मनोविज्ञान खडा गर्न ऊ सफल भयो । तर अनेकन प्रश्न बाबजुद मूलतः लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट प्राप्त बहुमतका लागि व्रिद्रोही शक्तिलाई बधाई दिनैपर्छ । “सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार बन” भनी जनताले दिएको आदेश शिरोपर गर्न माओवादीलाई सफलता मिलोस्, शुभकामनामा सकारात्मक आग्रह गांस्नैपर्छ ।माओवादीको जबर्जस्त आगमन निश्चय नै कांग्रेस-एमाले पराजयको एक प्रमुख कारण हो । तर आफ्नो पराजयलाई अरूका शिरमा थोपरिदिएर जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको कर्तव्य पूरा हुन्न । आफै भित्र आफ्ना अयोग्यता खोजेरमात्रै भविष्यको मार्ग सुगम तुल्याउन सकिनेछ ।
खेल हारेर मैदानबाट बाहिरिएको फुटबल टिममा एउटा आमप्रवृत्ति देखिने गर्छ- पराजयको अंश कारणलाई समग्र ठान्ने अनि एकले अर्कोलाई दोष पन्छाउने । राजनीतिको चित्र त झन् पराजयपछि उराठलाग्दो बनिदिन्छ । जस्तो कि यसबेला संविधानसभा निर्वाचनको पराजयमा स्वयम् व्यक्ति र पार्टीले समग्र कमजोरीलाई भन्दा अंश कारणहरूलाई हामी प्रधान ठहर्‍याइरहेका छौं । सबैले पराजयको गम्भीर समीक्षा चाहेका छन्, तर प्रायः सबैले आत्मगत विश्लेषणलाई पराजयको प्रमुख कारण ठानिरहेका छन् ।
शेरबहादुर देउवालाई सोधौं, उहांले भन्नुहुनेछ- माओवादीले सिर्जना गरेको भयबाट कांग्रेस हार्‍यो । सुशील कोइरालाले भयसंगै जातिवाद र सस्ता नारालाई दोष दिनुहुनेछ । रामचन्द्र पौडेलको ठहर के हुनसक्छ भने मबाहेक अरू कोही पनि आफ्नो क्षेत्र छोडेर अरूलाई सघाउन गएन, चुनाव प्रचारको संगठित अभियान नभएर कांग्रेस हार्‍यो । “नेतृत्वको असफलताले कांग्रेस पराजित भएको हो”, नरहरि आचार्यले मौकामा आफ्नो थेसिस यसरी पेस गरिसक्नुभएको छ । तर नेतृत्वमा रहेका केबी गुरुङ भन्नुहुन्छ, माओवादीलाई अलि बढी काखी च्यापेको परिणाम कांग्रेसले भोग्दैछ । गृह प्रशासनलाई दोष देखाउनुहुन्छ सुजाता कोइराला, के भनाइसाथ भने सुरक्षा राम्रो नहुंदा म हारें, कांग्रेस हार्‍यो । कृष्ण सिटौलाको जवाफ हुन्छ, गणतन्त्रमा जाने पार्टी निर्णयको विपक्षमा कतिपय नेताले बोलिदिएपछि जनताले हामीलाई कसरी विश्वास गर्छन् – उता साधु नेता शंकर पाण्डे कराइरहनुभाछ, भ्रष्ट अनुहारहरूलाई अघि लगाउन नछाडेपछि कांग्रेस नहारेर को हार्छ – यता गगन थापा र प्रदीप पौड्यालहरूको भनाइ छ, युवाहरूको अभिमतलाई नबुझ्दा, युवा उम्मेदवारीलाई विशेष प्राथमिकता नदिंदा कांग्रेस पछाडि पर्‍यो । अर्थात् आ-आफ्नै बुझाइ र ठम्याइहरू छन् । अपूरो भए पनि कतिपय वास्तविक छन्, तर कतिपय आत्मगत मात्र । आशा गरौं, सतही, आवेशपूण र एककोणीय ठहरबाट माथि उक्लिएर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पराजयको गम्भीर र वस्तुगत विश्लेषण गर्न सक्नेछ ।
शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेसले निभाएको प्रमुख भूमिकालाई हामीले जनतासमक्ष बुझाउन सकेनौं । गणतन्त्रप्रति कांग्रेसको निष्ठा ढुलमुले छ भन्ने आशंका र प्रचारलाई हामीले चिर्न सकेनौं । कांग्रेसको उपल्लो पंक्तिमा विराजमान कतिपय नेता-नेतृले संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेर सुरुमै बजारको जो वातावरण बिगारे, त्यसबाट सबै उम्मेदवार प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगे । नयां युगका लागि नवीन कांग्रेस भन्ने सोच, शैली र प्रवृत्ति विकास गर्न नसक्दा कांग्रेस यथास्थितिवादी हो भन्ने प्रहारलाई परास्त गर्न सकिएन । नयां राजनीतिक शक्तिहरू मैदानमा आएका बेला हामी पुरानै ढंग र पुरानै व्यक्तित्वहरूको अधिकतासाथ मैदानमा उत्रियौं । वास्तवमा कांग्रेसका पराजयपछि दर्जनौं कारण छन् । नेतृत्व तहमा पर्याप्त जातिगत सन्तुलनका बाबजुद अनेक जाति, भाषा, भेष र भूगोलले आफ्नो प्रतिविम्ब कांग्रेसमा देख्न सक्नेगरी विश्वास रोप्न सकेनौं हामीले । पछिल्लो मधेस आन्दोलन र अनेकन समूहको संर्घष कांग्रेसकै प्रमुख अग्रसरतामा सम्झौतामा पुगेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले पुंजीकृत गर्न सकेनौं । चित्रहरूले प्रस्ट्याएका छन्, मध्यम वर्गमा रहेको हाम्रो प्रभाव घटेको छ र निम्न वर्गसंगको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । युवाहरू खासगरी नवमतदाताका नवीन आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र ठूला भनिएका दलमध्ये सबैभन्दा कम प्रतिशतमा युवा उम्मेदवार अघि सार्नु पनि कांग्रेसको कमजोरी सावित भएको छ । दृश्य बताउंछ, न पूर्व साथ रह्यो, न सुदूर पश्चिम । न तर्राईको विश्वास रह्यो, न पहाडको भरोसा । पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई भावनात्मक स्वरूपमा बदल्न नसक्नु र स्थानीय तहमा दुइ-दुइवटा कमिटीको विचित्रतालाई जीवित राख्नु पनि पराजयका अनेकमध्ये एक सहायक कारण बन्न पुग्यो । न पार्टीका चुस्त कमिटी बने, नत भ्रातृ संस्थाहरूकै । भद्रगोल स्थितिमा चुनाव धान्ने कार्यमात्र भयो । स्वाभाविक छ, यस्तो स्थितिमा रहेको पार्टीले माओवादी त्रासबाट मतदातालाई भयमुक्त गराउन सक्ने कुरै थिएन । प्रमुख पार्टी, सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहेको दलले नै निर्वाचनमा सुरक्षाको अनुभूति गराउन नसक्ने भएपछि मतदाताले आफ्नो सुरक्षासंग भोट नसाटेर कमजोर छाताको भरोसा कसरी गर्न सक्छन् ?
पराजयको गम्भीर समीक्षा सांच्चै गम्भीर रूपमा हुनुपर्छ । सामान्य रगत जांचदेखि सिटिस्क्यानसम्म जरुरी छ । अस्पतालमा छ कांग्रेस, बाटा दुइमात्र छन्- सही उपचारबाट पुनःजीवन कि घाटतर्फ पूर्णविराम । मलाई लाग्छ, कांग्रेसको लामो जीवनमा यो प्रतिकूलतालाई क्षणिक तुल्याउन सकिनेछ, पार्टी सञ्चालनको रणनीतिमा परिमार्जन र नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरेर । वैचारिक रूपले कांग्रेस हारेको छैन । बरु फरक बाटोमा हिंडेका राजनीतिक शक्ति पनि कांग्रेसले हिंडेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटोमा आएका छन् । हुनै सक्तैन भनिएको संविधानसभाको चुनाव कांग्रेस सभापतिको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेसले गरेको अगुवाइ सफलताको विन्दुमा पुगेको छ । शक्ति, बन्दुकको नालबाट होइन, ब्यालेटबाट निस्कन्छ भन्ने दर्शन सबैलाई बोकाउन कांग्रेस समर्थ भएको छ । सयौं कार्यकर्ता अनाहकमा मारिए पनि तिनका गाउंबस्तीबाट अझ पनि २० लाखभन्दा बढी मत कांग्रेसलाई प्राप्त भएको छ । अतः तिनै सहिद, असुरक्षाबीच बांचेको कार्यकर्ता अनि तिनले दिलाएका २० लाख मतलाई शिरमा राखेर कांग्रेसले आगामी राजनीतिको बाटो कोर्नुपर्छ । संविधानसभामा दोस्रो स्थानमा रहे पनि अझै कांग्रेस अगुवाइ अभिभावकत्वको दृष्टिले राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको विश्वासको केन्द्रमै रहेको छ । यिनै भूमिकाहरू भित्रबाट कांग्रेसले आफ्नो आगामी यात्रा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
यतिबेला राष्ट्रको प्रमुख दायित्व संविधानसभाको पहिलो बैठकको तयारी गर्नु हो । गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने सर्वोत्तम विधिको छनोट अनि कार्यान्वयनपछिको अप्ठ्याराहरूको सामना सबै दलको साझा कर्तव्य हो । दल विशेषको विजय या पराजयभन्दा माथि राष्ट्रको विजयलाई सुनिश्चित गर्ने, रक्तहीन क्रान्तिलाई एकताबद्ध भई सम्पादन गर्ने घडी हो यो । शाहीसत्तासंग सहकार्य गर्दा नैतिकताको हेक्का नरहने, माओवादीसंग सहकार्य गर्दा नैतिकताको प्रश्न कोर्ने घडी होइन यो । त्यसैले कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच, माओवादी र मधेसवादीबीच, अनि गणतन्त्र नेपाल र अन्तराष्ट्रिय समुदायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई अभिभावकीय ओत प्रदान गर्न सक्नैपर्छ । नयां संविधान र संघीयताको रेखाङ्कनका लागि कांग्रेसको सैद्धान्तिक प्रस्तावना तुलनात्मक रूपले बढी व्यावहारिक, सन्तुलित र लोकतान्त्रिक छ । तर त्यसलाई साझा सहमतिको दस्तावेज बनाउन निश्चय नै सहज छैन । तर कांग्रेसले त्याग र प्राप्तिको दोहोरो रणनीतिसाथ सहमतिको संविधान निर्माण गर्न योगदान दिनुछ । गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक भविष्य निश्चित गर्दै अखण्ड नेपालको सन्तुलित संघीयतामा आमसहमतिको खोजी पनि गर्नुछ । हेक्का राख्नुपर्छ, हामी नयां सक्रमणकालमा प्रवेश गरेका छौं, चुनाव सकिंदैमा चुनौती सकिएका छैनन् । त्यसैले जरुरी छ, पूवाग्रहमुक्त राष्ट्रिय चिन्तनको ।
संविधानसभामार्फत युग परिवर्तनलाई सम्पादन गर्न लाग्दैछ देश । यस घडीमा देशले र्सवत्र परिवर्तनको माग गरेको छ । जनादेश र देशले मागेको छ- परिवर्तित कांग्रेस । अर्थात् कांग्रेसमा परिवर्तन । अर्थात् नयां युगका लागि नयां कांग्रेस ।
यो सम्भव छ । पराजयको यो घडीमा राष्ट्रभरिका कांग्रेसजनले संकल्प लिन जरुरी छ, शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको अभियानमार्फ हामी कांग्रेसको नयां आधारशिला खडा गर्नेछौं । इतिहासलाई नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा भविष्यको नेतृत्व गर्न सक्नेगरी नयां प्राण भर्नेछौं ।
-लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)
साभार: कान्तिपुर, २४ अप्रिल २००८
This entry was posted on अप्रील 24, 2008 at 10:26 बिहान	and is filed under Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “कांग्रेस पराजयपछिको बाटो”
अप्रील 25, 2008 at 3:58 बिहान
अन्धाले हात्ती छामे जस्ते लाग्यो कांग्रेस जन्को हारको आफ्ना हेराई र भोगाई, शर्माजीको लेख्ले सम्पूर्ण कारण पहिल्याउने प्रयास गरेको देखीन्छ
हाल यू स ऐ